Bayaanka Gaaritaanka - Dugsiyada Xaafada Robbinsdale
Waxaan dooneynaa in qof kasta oo booqda websaydhka Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale inuu dareemo soo dhaweyn isla markaana uu waayo-aragnimada u helo faa'iido.
Si aad nooga caawiso inaan ka dhigno degellada Dugsiyada Robbinsdale Aag meel wanaagsan oo qof walba ah, waxaannu adeegsan jirnay Tilmaamaha Helitaanka Macluumaadka Webka (WCAG) 2.0 . Tilmaamahan waxay sharraxayaan sida looga dhigayo waxyaabaha ku jira webka kuwo si sahlan loogu heli karo dadka naafada ah, iyo u adeegsi saaxiibtinimo qof walba.
Tilmaamuhu waxay leeyihiin saddex heer oo marin loo helo (A, AA iyo AAA). Waxaan u dooranay Heerka AA bartilmaameedka websaydhka Dugsigaaga.
Waxaan si adag uga shaqeynay websaydhka Dugsiyada Robbinsdale Aag waxaanan aaminsanahay inaan ku guuleysanay yoolkayagii ahaa helitaanka Heerka AA. Waxaan si joogto ah ula soconnaa shabakadda si aan u ilaalino tan, laakiin haddii aad wax dhibaato ah ka aragto, fadlan nala soo xiriir.
Noo soo sheeg fikirkaaga
Haddii aad ka heshay isticmaalka websaydhka Dugsiyada Robbinsdale Area, ama haddii aad dhibaato ku qabay qayb ka mid ah, fadlan la soo xiriir. Waxaan jeclaan lahayn inaan kaa maqalno mid ka mid ah siyaabahan soo socda:
email noogu soo dir s ue_holtz@rdale.org
naga soo wac 763-504-8055
Bayaanka marin u helka waxaa la sameeyay 29-kii Juunyo 2020 iyadoo la adeegsanayo Generator Statement Generator .